Tag: aforeto | Martech Zone
Fomba fanao tsara indrindra amin'ny pejy fitobiana: Ahoana ny fomba hanatsarana ny fiovam-po
Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Alakamisy, Jolay 9, 2015 Jenn Lisak Golding
Rehefa mitohy mivoatra ny marketing inbound, dia lasa sarotra kokoa ihany koa ny manao fomba mahomby. Ny marketing dia fantsona maro sy maro endrika. Tsy tsotra toy ny mandefa amin'ny tambajotra sosialy indroa isan-kerinandro na mandefa mailaka isam-bolana. Tsy maintsy manatanteraka paikady isan-karazany amin'ny paikady izay mifameno ianareo rehetra, sady afaka manamboatra sy manamboatra raha toa ka tsy mandeha ny tetika. Mandreraka ny maha a
Alahady, Jolay 8, 2007 Alakamisy Oktobra Oktobra 23, 2014 Douglas Karr
Misaotra an'i André tamin'ny fangatahako torohevitra voalohany tamin'ny fiteny hafa! Lendo.org (nadika: Mamaky) dia bilaogy iray avy any Brezila momba ny famerenana boky, ny fandalinana ny literatiora, ny teôria amin'ny literatiora, ny fiteny, ny sanganasa, ny tononkalo ary maro hafa! Misaotra ny Google Translate, afaka namaky tokoa ireo lahatsoratra aho ary nijery akaiky ilay tranonkala. André dia mpamaham-bolongana mahafinaritra ary azonao atao amin'ny asa sorany fa manao izany izy mba hizarana ny fitiavany ny mpihaino azy.